Weerar Askar lagu dilay oo ka dhacay Shabeellaha Dhexe - Awdinle Online
Weerar Askar lagu dilay oo ka dhacay Shabeellaha Dhexe
Wararka naga soo gaaraya degmada Balcad oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa waxaa ay sheegayan in halkaasi uu ka dhacay weerar sababay dhimashada askar ka tirsan Ciidamada Maamulka degmadaasi Balcad.
Weerarka ayaa yimid, kadib markii Xubno la sheegay inay ka tirsanaayeen Al-Shabaab ay rasaas ku fureen askar ku sugneyd Bar-koontorool oo laga ilaaliyo degmada Balcad oo ku taalla wadada ka timaada dhanka degmada afgooye, waxaana weerarkaas ku geeriyooday laba askari.
Goobjoogayaal ayaa waxaa ay sheegeen in sidoo kale Al-Shabaab ay horay u sii qaateen laba qoray AK47 ah & Booshashkooda oo ay wateen askarta la dilay, iyaga oo goobta isaga baxsaday.
Ciidamo ka tirsan kuwa Maamalka degmada Balcad ayaa tegay halka uu weerarka ka dhacay, iyaga oo meydka kasoo qaaday Barta-koontorool oo laga ilaaliyo degmada, isla markaana lagu hubiyo gaadiidka soo gala.
Goobta Ciidamada lagu weeraray ayaa dhowr jeer oo hore waxaa ka dhacay weeraro askar lagu dilay,waxaana Weerarka Maanta ka dhacay weli ka hadlin Mas’uuliyiinta iyo laamaha Amniga degmada Balcad.
Previous articleDowladda Soomaaliya oo Ciidamadii ugu badnaa geysay Gobolka Gedo+Sawiro
Next articleWakiilo ka socda Beesha Caalamka oo Baydhabo kula kulmay laftagareen
Kulan dhexmaray Qoor Qoor iyo Beesha Caalamka
Jubbaland oo war kasoo saartay xaalka Gobolka Gedo & dilal ka dhacay
Puntland oo soo saartay Amar la xiriira lacagta Shillin Soomaaliga
Saraakiil loo xiray dilka Guddoomiyihii degmada Hodan
Maxay dowladda Soomaaliya ka tiri qaraxyada kusoo batay Muqdisho?
Guddoomiye Cumar Filish oo ka hadlay dilka Guddoomiyihii degmada Hodan Guddina Magacaabay
Duqeyn ka dhacday Jubbooyinka & Saraakiil lagu dilay
Itoobiya oo kaxeysatay dad ay ka afduubatay Gudaha Soomaaliya
Guddoomiyihii degmada Hodan oo Muqdisho lagu dilay